IQOO Pro 5G enweela ụbọchị mmeghe gọọmentị | Gam akporosis
The iQOO Pro 5G ga-abịa na Snapdragon 855 Plus ma nweela ụbọchị ntọhapụ
Vivo kwalitere ya nọọrọ onwe ya ika iQOO tupu afọ a, na February. Ọ na-elekwasị anya na ngalaba egwuregwu ịgba egwu, yabụ ụdị niile dị na katalọgụ nke ụlọ ọrụ nke abụọ a nwere ọtụtụ atụmatụ, nkọwapụta teknụzụ, ọrụ na mmelite ndị enyere iji nye ndị ọrụ ahụmịhe kachasị mma egwuregwu., Na ama na-esote nke ika ahụ na-abịa n'ihu, nke na-abụghị onye ọzọ karịa Jehova iQOO Pro 5G, ọ ga-abụ ọnụ ọzọ Ịgba Cha Cha iji ikike dị ịtụnanya na-agba ọsọ ihe niile echere ya n’ihu.
Ihe ngosi ama a ga - abụ, ma eleghị anya, ikpo okwu mkpanaka ọ ga - egosi. Kpọmkwem, SoC nke ọ ga-ebunye n'ime eriri afọ ya nwere obi ụtọ Snapdragon 855 Plus Qualcomm, nke nwere ụfọdụ ndozi na usoro nke Snapdragon 855 mbụ. Anyị agaghị echere ogologo oge iji mụta ihe niile gbasara ngwaọrụ a, dịka a ga-ekwuwapụta ya na ụbọchị ole na ole, na ụbọchị a ga-eme ya ọkwa gọọmentị bụ ihe anyị na-ekwu maka n'okpuru.
Na nso nso a, akwụkwọ mmado maka Vivo's iQOO Pro 5G - nke ekwuru tupu oge ahụ iQOO Gụnyere 5G-. Nke a na-ekwuputa ụbọchị mmalite nke ọkwa nke ngwaọrụ dị elu, nke dị ihe dị ka izu abụọ, kemgbe Ọ bụ Ọgọstụ 22 ka a ga-ewepụta ya.
Akwụkwọ IQOO Pro 5G
Dị ka aha ahụ pụtara, ekwentị ahụ ga-abụ 5G. Ebe ọ bụ na ọ na-akwado Snapdragon 855 Plus, ọ ga-abụ onye mbụ na igwe na-arụ ọrụ igwe a iji nye nkwado maka njikọ 5G.. Ọzọkwa, a na-atụ anya na ọ ga-abịa na ngosipụta FullHD + nwere ume dị elu karịa nke ọkọlọtọ, nke bụ naanị 60 Hz, yana àgwà ndị ọzọ dị ịtụnanya na usoro egwuregwu na ọrụ. Anyị enweghị ike ichefu mmejuputa usoro usoro friji nke ọ ga-eweta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » The iQOO Pro 5G ga-abịa na Snapdragon 855 Plus ma nweela ụbọchị ntọhapụ
Google Maps mma ntuziaka igodo